February 2020 - MM Live News
ထီပေါက်စေသော နည်းလမ်းများ…အားလုံးပဲ ထီပေါက် ကံထူး နိုင်ကြပါစေ…
အားလုံးပဲ ထီပေါက် ကံထူး နိုင်ကြပါစေ…ထီပေါက်စေသော နည်းလမ်းများ… ထီပေါက်စေနိုင်သော နည်းလမ်းများ မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား ယက္ကန်းစင်တောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သိဒ္ဓိအောင် ပုတီးစိပ်နည်း (၁) သိဒ္ဓိ ဘဂဝါ အရဟံ ၊ဗုဒ္ဓေါ မေ သတ္တပါကာရံ ၊ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ (၂) သိဒ္ဓိ ဘဂဝါ အရဟံ ၊ ဓမ္မော မေ သတ္တပါကာရံ ၊ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ (၃) သိဒ္ဓိ ဘဂဝါ အရဟံ ၊ သံဃော မေ သတ္တပါကာရံ ၊သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ဂါထာ(၃)ပုဒ်လုံး ဆုံးမှ ပုတီး (၁)လုံးချ (၉)ပတ် သက်စေ့(မိမိစွမ်းနိုင်သမျှ) (၉) ရက်၊ (၄၅)ရက်စသည်ဖြင့်် […]
ကွမ်းယာဆိုင်အတွင်း ပုခက်ပေါ်ရှိ လသားအရွယ်ခလေးငယ်အား ထော်လာဂျီမှ ဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွား
၂၉.၂.၂၀၂၀ (ရန်ကုန်) ကွမ်းယာဆိုင်အတွင်းထဲကပုခက်ပေါ်ရှိလသားအရွယ်ခလေးငယ်အား ထော်လာဂျီမှဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွား ခလေးငယ်သေဆုံး တိုက်ကားစက်ရုံလမ်းကြား ထွေလာဂျီမှ ကွမ်းယာဆိုင်အတွင်းရှိပုခက်ပေါ်မှ ၂လ အရွယ် ကလေးငယ်အား ဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်…. မေတ္တာလွှမ်းခြုံအဖွဲ့မှ ဦးစံမြင့်ဖုန်းဆက်ပြီး သွားရောက်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်……ပုလဲလူမှုကယ်ဆယ်ရေးနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ အင်းစိန်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကူညီခဲ့ပါသည်။ ပုလဲမြို့သစ်မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်အခမဲ့ကူညီသည်။ ph09777778710 / ph09777778720 /PR. 11 / Kyaw Win Htut unicode ၂၉.၂.၂၀၂၀ (ရနျကုနျ) ကှမျးယာဆိုငျအတှငျးထဲကပုခကျပျေါရှိလသားအရှယျခလေးငယျအား ထျောလာဂြီမှဝငျတိုကျမှုဖွဈပှား ခလေးငယျသဆေုံး တိုကျကားစကျရုံလမျးကွား ထှလောဂြီမှ ကှမျးယာဆိုငျအတှငျးရှိပုခကျပျေါမှ ၂လ အရှယျ ကလေးငယျအား ဝငျတိုကျမှုဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ…. မတ်ေတာလှမျးခွုံအဖှဲ့မှ ဦးစံမွငျ့ဖုနျးဆကျပွီး သှားရောကျကူညီပေးခဲ့ပါသညျ……ပုလဲလူမှုကယျဆယျရေးနှငျ့ နာရေးကူညီမှုအသငျးမှ အငျးစိနျဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျကူညီခဲ့ပါသညျ။ ပုလဲမွို့သဈမင်ျဂလာဒုံမွို့နယျအခမဲ့ကူညီသညျ။ ph09777778710 / ph09777778720 /PR. 11 / […]
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် သံသယဖြင့် လူနာတစ်ဦး မုံရွာဆေးရုံရောက်လာ…
February 29, 2020 February 29, 2020 MM Live News
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် သံသယဖြင့် လူနာတစ်ဦး မုံရွာဆေးရုံရောက်လာ အိဖြိုး / မုံရွာ၊ဖေဖော်ဝါရီ-၂၉ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် သံသယဖြင့် မုံရွာဆေးရုံကြီးသို့ လူနာတစ်ဦး ယနေ့ ညနေပိုင်းက ရောက်ရှိနေသည်။ ၎င်းသည် တန့်ဆည်မြို့ ညောင်ဇီးကုန်းရွာ မှ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် အမျိုး သားဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော ၃ လခန့်က တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်သို့ လက်သမား လုပ်ငန်းသွားရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး ယခုလ ၂၈ ရက်က နေရပ် သို့ပြန်လာသူဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းရရှိသည်။ ထိုသူသည် ရုတ်တရက် ကိုယ်ပူ၊ချောင်းဆိုး ဖျားနာသဖြင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန သို့သွားပြရာ တန့်ဆည်မြို့နယ်ဆေးရုံပြီးမှတဆင့် မုံရွာဆေးရုံသို့ လွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းလူနာအား လူမှုကူညီရေးကားဖြင့်မုံရွာသို့ခေါ်လာပြီး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ လူနာအား မုံရွာဆေးရုံတွင် မည်သို့ ထားရှိမည်ကို မုံရွာဂေဇက်မှ သီးသန့်အတည်ပြုနိုင်ရန် […]
၀မ်းချုပ်တတ်သူ ၊ ၀မ်းမမှန်သူများအတွက် အလွယ်ဆုံးနည်း
ဝမ်းချုပ်သူများအတွက် အကြောပြေ၊ခါးနာပြေ၍ ဝမ်းမှန်စေသည့် ကရွတ်ခွေ ထမင်းစားတဲ့အခါမှာ ထမင်းတစ်လုပ်​၊ရေတစ်မှုတ်သောက်တတ်သူတွေ၊ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါရေကို ဗိုက်တင်းအောင်သောက်တတ်သူတွေဟာ…. သွေးပြစ်ခြင်း၊ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊စမြင်းခံခြင်းနဲ့ ကိုယ်လက်တောင့်တင်းခြင်း မလုပ်ချင်မကိုင်ချင်အောင် ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း စတာတွေခံစားရလေ့ရှိတတ်ပါ တယ်။ ထမင်းစားတဲ့အခါနှစ်ရှည်လများ​ရေအေးသောက်လာတဲ့သူတွေ အတွက် အထက်ပါဝေဒနာတွေ ကင်းဝေးစေဖို့တစ်လတန်သည် နှစ်လတန်သည်ဝမ်းကိုပြန်ကျင့် ပေးရပါတယ်…. 1။ထမင်းစားနေဆဲနဲ့စားပြီးပြီးခြင်း​ရေအေး/ရေခဲရည်လုံးဝမသောက်ပါနဲ့။ 2။ရေနွေးအနည်းငယ်နဲ့ဟင်းချို တဝသောက်လို့ရပါ တယ်။ 3။စားပြီးပြီးခြင်းထန်းလျက်အညိုတစ်ခဲစားပေးပါ။ 4။ရေကိုနာရီဝက်ကျော်မှသာနည်းနည်းခြင်းသောက်ပါ။ 5။ထမင်းစားပြီးတစ်နာရီကျော်သွားရင်တော့သောက် လို့ရပါပြီ။ရေခဲရည်ကိုတော့လုံးဝမသောက်ပါနဲ့။ အခုပြောတာကဝမ်းမချုပ်၊​သွေးမပြစ်ရအောင်အလေ့ အကျင့်ပြုလုပ်ရမယ့်နည်းပါ။ အခုပေးမယ့်နည်းက ဝမ်းချုပ်လွန်းသူများလုပ်ဆောင်ရမယ့်နည်းပါ 1။နံနက်စောစောအိပ်ရာထမှာရေလည်းမသောက်ရသေးမီ၊ ဘာမှမစားရသေးမီ ပုဆိုးတစ်ထည်ကိုကရွတ်ခွေပြု လုပ်ပြီး၊ဝမ်းလျားမှောက်အနေ အထားနဲ့ချက်အောက်မှာထားပါ။ 2။အသက်ကိုတစ်ဝရှူပြီးလေကိုဖြေးညှင်းစွာပြန်ထုတ် ခြင်းနဲ့အတူ ချက်ကို ကရွတ်ခွေပေါ်ဖိချပါ။ စိတ်ထဲကလည်းအမှတ်စဉ်​(၁)ကနေ(၁၀)အထိဆိုပါ။ အဲ့အချိန်မှာအသက်အောင့်ထား​ ပေးပါ။ 3။ ၎င်းကဲ့သို့(၅)ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ တချို့က(၃)ကြိမ်မျှလုပ်ရုံနှင့်ပင် ဝမ်းသွားပါသည်။ တချို့က(၅)ကြိမ်၊တချို့က(၇)ကြိမ်ပြုလုပ်ရပါသည်။တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အကြိမ်​ရေကွာခြားနိုင်ပါသည်။ 4။အဆိုပါနည်းသည်ဝမ်းကြော တင်းခြင်း၊ခါးကြောတင်း ခြင်းနှင့် ခါးနာခြင်းများကိုအမှန်တကယ်​ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ မှတ်ချက်။ ဝမ်းဗိုက်ခွဲထားသူများအစာအိမ်ဝေဒနာ […]
အိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ ဦးခေါင်းထက်၌ ဒက်ချေး.များများနဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ကိုရင်လေး ဘုံဆွမ်းလောင်း ဝင်မိတဲ့အခါ
အထင်မသေးနဲ့ အိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ ဦးခေါင်းထက်၌ ဒက်ချေး.များများနဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ကိုရင်လေးမို့ အထင်မသေးပဲ မိမိဒါနဆွမ်း စေတနာတွေ အလဟားသက်မဖြစ်သွားပါစေနဲ့… ရဟန်းတွေလို သေသပ်မူ့မရှိ သန့်ရှင်းမူ့နဲ့မပြည့်စုံတဲ့ ခြေထောက်မည်းတူးတူး သင်္ကန်း ဖြစ်သလိုရုံထားတဲ့ ကိုရင်လေးမိမိ စေတနာသဒ္ဒါတရားနဲ့လောင်းတဲ့ ဘုံဆွမ်းလောင်း ဝင်မိတဲ့အခါ ညစ်ပတ်နေတာပဲဆိုပြီး အထင်သေးပြီး နှာခေါင်း မရှုံ လိုက်ပါနဲ့… ဆွမ်းခံရင်း လမ်းပေါ်ဆော့သွားတဲ့ ကိုရင်ငယ်လေးကိုကြည့်ပြီး အပြစ်မပြောပဲ ငါ့သားလေးဆိုရင်လည်း ဒီလိုပဲ ဆော့မှာဆိုပြီး မိခင်နေရာယူပေးသွားပါ… ကိုရင်ငယ်လေးမို့ အတန်းပညာတွေ မရှိသေးလို့ ဂုဏ် ပညာရေးတခုအတွက်နဲ့ ကိုရင်ငယ်လေးတွေကို အားရှိ ဆော့နေတာ စာကျမကျက်ဘူးဆိုပြီး အပြစ်တွေလိုက်မပြောကျပါနဲ့.အချိန်မတန်သေးလို့ပါ.. ကိုရင်ငယ်လေးရဲ့ ကြိုးစားမူ ကိုရင်ငယ်လေးရဲ့ အောင်မြင်မူ့ ကိုရင်ငယ်လေးရဲ့ မေတ္တာဓာတ်တွေက ဆရာတော်ကြီးဖြစ်သွားမှ မိမိစကားတွေ အမှတ်တမဲ့ကနေ အမှတ်တရ`နောင်တ’ တွေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်…. မထေရ်ကြီး […]
ဒီပုံလေးfb ပေါ်တက်လာတာတွေ့တော့ တွေ့တွေ့ချင်း လှောင်ပြီးဟားတိုက်ရယ်မိတယ် ….ဒီလောက်ရူးရသလားပေါ့ 
မူရင်းဓာတ်ပုံ ပိုင်ရှင် Thiha tun ဆိုသူရိုက်ထားတဲ့ဒီပုံေ လးfb ပေါ်တက်လာတာတွေ့တော့ တွေ့တွေ့ချင်း လှောင်ပြီးဟားတိုက်ရယ်မိတယ် ….ဒီလောက်ရူးရသလားပေါ့ …. ပြီးမှကြည့်နေရင်းကြည့်နေရင်းနဲ့ မရယ်ရက်တော့ပဲ မျက်ရည်ဝိုင်းလာမိတယ်။ အဲ့ကောင်မလေးနေရာ မှာ ကိုယ့်ပုံရိပ်ကို ပြန်တွေ့လိုက်ရသလို ၊အဲ့ကောင်မလေးနေရာမှာ အမျိုးသမီးတော်တော်များများရဲ့ပုံရိပ်ကို ပြန်တွေ့လိုက်ရသလိုခံစားမိလိုက်လို့ ပါပဲ ။ ကိုယ်တို့မိန်းမတွေ ရဲ့ မိုက်ရူးရဲဆန်မှု ၊စွန့်စားမှုတွေ ကိုအဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပြန်မြင်နေရသလိုခံစားမိတယ် ။ ကိုယ်တွေက ကိုယ့်ကိုလှမ်းဆွဲတဲ့လက်တစ်စုံကိုယုံကြည်မိတဲ့အခါ ၊ စွန့်စားရဖို့မကြောက်တော့တဲ့ကမ္ဘာ့သတ္တိအရှိဆုံးလူသားတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒီလက်တစ်စုံဟာကိုယ့်အတွက် အလုံခြုံဆုံး စောင့်ရှောက်မှုကိုပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တကြီး ရူးမိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလက်တစ်စုံဟာ ကိုယ့်အတွက် မေတ္တာတရားအပြည့်နဲ့ ဖေးမလိမ့်မယ်လို့ အားကိုး တကြီး ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလက်တစ်စုံသာ ရှိရင်အရာရာရင်ဆိုင်ရဲပြီဆိုတဲ့ သတ္တိတွေနဲ့ လောကကြီးကို စိန်ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ်ဆွဲမိတဲ့ လက်တစ်စုံဟာကိုယ့်ကို ဖေးမစာနာပြီး တွဲခေါ်စောင့်ရှောက်တဲ့လက်မျိုး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ရင် […]
စပါးလင်ကို ဒီလိုလေးထားလိုက်တာ ခြင်တစ်ကောင်မှ မရှိတော့ပါ…. သိတာတောင်နောက်ကျနေတာ…. မီကာဇာ (မာကျူရီ)ဟိုတယ် ရေကူးကန်ဘေးမှာ စိုက်ထားတာတွေ့လို့မေးကြည့်တာ… ခြင်မလာအောင်လို့ပြောလို့စမ်းတာ တကယ်ဟုတ်နေတယ်…. ကျွန်တော်ဆေးဆရာ တယောက် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ …. အားလုံးကို ကျန်းမာစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တွေ့သမျှဆေးနည်းတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်….။orginal writer တစ်ခြား ခြင်မကိုက်စေမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်းနည်းလမ်းများ…. နွေရာသီရောက်လာနဲ့အမျှ ညနေခင်းတွေဆို အပြင်မှာ လေညှင်းလေး ထွက်ခံရင်းနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူချင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခြင်ကိုက်တဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရကြပါတယ်။ ခြင်ကိုက်တဲ့အခါ ယားယံတာ၊ ယောင်ရမ်းတာတွေအပြင် များစွာသောရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ခြင်မကိုက်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ကြက်သွန်ဖြူစားပါ ကြက်သွန်ဖြူအနံ့ကို ခြင်တွေအပြင် တခြားအင်းဆက်ပိုးမွှားတွေက မခံနိုင်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် […]
ကားရှေ့ရောက်မှချော်လဲရလား ညီမရယ်လူကို ပြာထွက်သွားတာပဲ…
February 28, 2020 MM Live News
ကားရှေ့ရောက်မှချော်လဲရလား ညီမရယ်လူကို ပြာထွက်သွားတာပဲ ကြိတ်မိပြီထင်နေတာ ။ ရတနာ ၃ ပါး ကျေးဇူးကြောင့်သာပေါ့။ နို့မို့သာဆို ဒီချိန် အချုပ်ထဲရောက်နေလောက်ပြီ….မသေကောင်း မပျောက်ကောင်း ညီမလေးရယ်…..ဖြတ်ပြေးတာက ပြေးပါလွတ်အောင်ပြေးပါ။ ကားရှေ့တည့်တည့်ကြီးရောက်မှ ချော်လဲတာကတော့ ကားသမားဘဝ ထောင်ထဲကို ထည့်လိုက်သလိုပါပဲ။သတိကြီးကြီးထားပြီး ဘရိတ်အုပ်နိုင်လို့သာ တော်တော့တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေလည်းရှိနေလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်တော့ ညီမလေး ဘဝရော ကားသမားဘဝပါ အဆင်မပြေထောင်ထဲနေရလောက်ပါပြီ…..။ လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် …… Zin Min Aung unicode ကားရှရေ့ောကျမှခြျောလဲရလား ညီမရယျလူကို ပွာထှကျသှားတာပဲ ကွိတျမိပွီထငျနတော ။ ရတနာ ၃ ပါး ကြေးဇူးကွောငျ့သာပေါ့။ နို့မို့သာဆို ဒီခြိနျ အခြုပျထဲရောကျနလေောကျပွီ….မသကေောငျး မပြောကျကောငျး ညီမလေးရယျ…..ဖွတျပွေးတာက ပွေးပါလှတျအောငျပွေးပါ။ ကားရှတေ့ညျ့တညျ့ကွီးရောကျမှ ခြျောလဲတာကတော့ ကားသမားဘဝ ထောငျထဲကို ထညျ့လိုကျသလိုပါပဲ။သတိကွီးကွီးထားပွီး […]